Wararkii ugu dambeeyay kooxaha EPL halkaan kaga bogo – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Wararkii ugu dambeeyay kooxaha EPL halkaan kaga bogo
By admin on 19/03/2019 No Comment
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Liverpool ayaa quus ka taagan helitaanka Timo Werner madaama Bayern Munich hormar ka sameeneyso sidii ay weeraryahankan xagaagan RB Leipzig kaga soo qaadan laheyd.
Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in Paul Pogba noqon karo laacibka khadka dhexe caalamka ugu wanaagsan madaama uu siweyn u hormariyay kubadiisa dhanka dhalinta goolasha, caawinta, raacashada iyo kartida hogaaminta kooxda.
Maamulka Chelsea ayaa dhaliil xoogan usoo jeediyeen bandhiga cayaartooyda kooxda sameenayaan sidoo kalena waxay ka arinsanayan sidii macalin Sarri xilka looga qaadi lahaa inta lagu maqan yahay kulamada xulalka aduunka cayaarayaan.
Luke Shaw ayaa xulka England isaga baxay dhaawac awgeed wuxuuna seegi doonaa kulamada Sedexda Libaax la cayaarayaan xulalka Czech Republic iyo Montenegro.
Callum Hudson-Odoi ayaa markii ugu horeesay xulka England loogu yeeray wuxuuna ka qayb qaadan doonaa kulamada isreeb reebka Euro 2020 xulka Ingiriiska cayaarayaan.
Halyee Nemanja Vidic ayaa maamulka Man United kula taliyay inaysan ku mashquulin soo qaadashada Toby Alderweireld oo Spurs ka tirsan madaama da’diisa horey u badatay wuxuuna United usoo jeediyay xagaagan daafacyo kale oo dhalinyar lasoo saxiixdaan.
Arsenal niyad jab kale ayay la kulmeen madaama agaasime Marc Overmars heshiis cusub kooxdiisa Ajax u saxiixay waxayna dhawaan Gunners ku hungoobeen heshiis inay la gaaraan agaasime Monchi oo isagana Sevilla dib ugu laabtay.
Fabinho ayaa saxaafada u sheegay in Firmino sabab u yahay inuu ku nagaado nolosha Liverpool sidoo kalena wuxuu qirtay bilawgii xili cayaareedkan inuu mar ku fikiray Anfield isaga tago.
Eden Hazard ayaa la sheegay inuu heshiis qarsoodi ah Real Madrid la gaaray sidoo kalena uu kooxdiisa Chelsea ka sugaayo inay shaaca ka qaadeen qiimaha ay ku doonayaan madaama qandaraaskiisa ku eg yahay xagaaga 2020 sidoo kalena uusan diyaar u ahayn inuu heshiis cusub saxiixo.
Macalin Pep Guardiola ayaa ku kalsoon in kooxdiisa Man Cit afar koob xili cayaareedkan isku qaadi karto waa haddiii cayaaryahan walbo oo City ka tirsan dadaal 100% ka badan uu la imaado inta xili cayaareedkan ka harsan.
Namenja Matic ayaa aaminsan in Solskjaer uu yahay macalinka ku haboon shaqada Man United joogto looga dhigo sidoo kalena uu kooxda guulo gaarsiin karo xili cayaareedka dambe dibna u dhisi karo.
Man United ayaa hoos u dhigay cabsida ah Anthony Martial dhaawaca uu xulka France kaga baxay halis yahay waxaana lagu kalsoon yahay in inta lagu maqan yahay kulamada xulalka aduunka dib kooxda ugu soo laaban doono.
Masuulka Man United ugu sareeyo Ed Woodward ayaa la ogaaday weli inuusan qaadanin go’aan rasmi ah oo uu macalin Solskjaer tababaraha rasmiga ah kooxda kaga dhigaayo.
Cesar Azpilicueta ayaa aaminsan in Chelsea xili cayaareedka dambe koobka horyaalada Yurub cayaari doonto asigoo ka dhawaajiyay in kooxdiisa koobka Europa League hanashadiisa ku dagaalami doonaan sidoo kalena aysan ka quusanin inay afarta sare EPL ku dhameestaan.
Daafaca kooxda Liverpool Andy Robertson ayaa iska fogeeyay inuusan daacad u ahayn xulkiisa Scotland madaama kulanka ay Kazakhstan la cayaarayaan Khamiista ka maqnaan doono asigoo doortay qaliin dhanka ilkaha iyo gowsaha lagu sameeyo oo xanuun ka sheeganayo!
Nicolas Otamendi ayaa xulka Argentina isaga baxay dhaawac dhanka qoobka kasoo gaaray mana cayaari doono labada kulan xulkan la cayaarayaan Venezuela iyo Moroccoee saaxiibtino ah.
Wararkii ugu dambeeyay kooxaha EPL halkaan kaga bogo added by admin on 19/03/2019